Public Health in Myanmar: The French Health Care System
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်ကို ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါပြီး ပြည်သူတို့အတွက် ၀န်ဆောင်မှုကို အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစနစ်၏ အဓိက အားသာချက်မှာ တရားဝင်နေထိုင်သူအားလုံးအတွက် ကျန်းမာရေးအာမခံပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် Universal Health coverage ဟုခေါ်သော အလုံးစုံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကို အသုံးပြုပါသည်။ ထိုစနစ်သည် "ကျန်းမာရေးအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး" မူကို အခြေခံပြီး လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက် ရောဂါဘရကင်းဝေးအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ပြင်သစ်အာမခံစနစ်ကို အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးနေသည်မှာ social security ဟုခေါ်သော အာမခံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရကလုပ်ကိုင်ပေးပြီး လူဦးရေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ကျန်ရှိနေသေးသော ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လူနာတစ်ဦးချင်းကျခံခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ private အာမခံ company များ မှ လည်းကောင်း ကျခံပေးပါသည်။ အာမခံကြေးကို ပေးဆောင်ရာတွင် နှုန်းထားပုံသေဖြင့် ပေးဆောင်ရပြီး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အလုပ်သမားတို့၏ ထည့်ဝင်ငွေများ နှင့် တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတို့မှ အဓိက ရရှိပါသည်။ ထို social security စနစ်အတွက် ပြည်သူတို့သည် ၀င်ငွေ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထည့်ဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထည့်ဝင်ရသော ပမာဏသည် တဖြည်းဖြည်းဖြင့် များလာပါသည်။
အစိုးရ၏ တာဝန်ကား ပြည်သူအားလုံး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ရရှိရေးဖြစ်ပါသည်။ ထည့်ဝင်သော အာမခံကြေးအပေါ်မူတည်ပြီး ထိုက်တန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော လူနာတို့၏ အခွင့်အရေး မဆုံးရှုံးစေရေးနှင့် နစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက်လည်း ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းကာ တည်မြဲအောင် လုပ်ဆောင်ရပါသည်။ တစ်နည်းဆိုသော် ပြည်သူတို့၏ လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူရပါသည်။ ဗဟိုအစိုးရမှနေ၍ လိုအပ်သော ဆေးရုံနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအရေအတွက် ပြည့်မှီအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရပါသည်။ လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ အပြင် လိုအပ်သည့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးရပါသည်။ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ပြည်နယ်အစိုးရများက အာဏာအချို့ကို ခွဲဝေကာ ထမ်းဆောင်ပေးပါသည်။
ပြည်သူပိုင်ဆေးရုံများသည် ကုတင်အရေအတွက် စုစုပေါင်း၏ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး လူနာကုသမှု၊ သင်ကြားရေးနှင့် သုတေသန လုပ်ငန်းများအတွက် အဓိက လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ Private ဆေးရုံများက အကျိုးအမြတ်အတွက် လုပ်ဆောင်ကြပြီး ခွဲစိတ်ကုသမှုများကို အဓိက လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အစိုးရဆေးရုံများနှင့် Private ဆေးရုံများအကြားတွင် ၀န်ဆောင်မှုအရေအသွေး ကွာခြားမှုနည်းပါးပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၁၀၀၀ ၌ ကုတင် ၉ လုံးမျှ အချိုးအစားရှိပါသည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ဆရာဝန်များသည် private နှင့် public ဆေးရုံနှစ်ခုလုံးတွင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဆရာဝန်စုစုပေါင်း၏ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် အစိုးရဆေးရုံများတွင် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ထိုဆရာဝန်တို့သည် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြပြီး အစိုးရမှ လစာပေးထားရပါသည်။ သို့သော် အစိုးရဆေးရုံများတွင် အလုပ်လုပ်ရသည်မှာ ခက်ခဲမှုများရှိသောကြောင့် ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းသော ဆရာဝန်တို့သည် private ဆေးရုံများတွင်သာ အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဆရာဝန်များ၏ စမ်းသပ်ခ နှင့် ခွဲစိတ်ခ တို့ကို ဆရာဝန်များသမဂ္ဂ (union) နှင့် အာမခံအဖွဲ့အစည်းများငြှိနှိုင်းကာ ကျွမ်းကျင်သူများက သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းသော ဆရာဝန်တို့သည် tariff reference ဟုခေါ်သည့် စမ်းသပ်ခသတ်မှတ်သည့်စနစ်ကို လိုက်နာကြသည်။ ထိုစမ်းသပ်ခမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိဆရာဝန်များ ၏ ညီလာခံမှာ သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိုစနစ်ကို မလိုက်နာပါက ဆရာဝန်တစ်ယောက်သည် မိမိစမ်းသပ်ခမည်မျှယူသည်ကို ကြိုတင်၍ လူနာကို အသိပေးရပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိမိ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဘွဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး စမ်းသပ်ခကို တိုး၍ ယူလို့ရပါသည်။ ဥပမာ - အထူးကုဆရာဝန်များ။ လူဦးရေ ၁၀၀၀ တွင် ဆရာဝန် ၃.၃၇ ယောက်ရှိပါသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ စနစ်သစ်တစ်ခုကို ထွင်လိုက်ပါသည်။ စနစ်သစ်အရ လူနာတစ်ယောက်သည် ဆရာဝန်နှင့် ပြချင်ပါက အရင်ဦးစွာ အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန် (GP) ဖြင့်ပြရပါမည်။ အဆိုပါ GP သည် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်အာမခံအဖွဲ့အစည်းတွင်လည်း စာရင်းသွင်းထားသူဖြစ်ရပါမည်။ အကယ်၍ ထိုဆရာဝန် မအားပါက သို့မဟုတ် မရှိပါက လူနာသည် အခြားဆရာဝန်တစ်ယောက်ထံတွင် ပြောင်းလဲ၍ ပြသပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲသည့်အတွက် အာမခံကြေးကို ထိခိုက်မှုမရှိချေ။ ပြောင်းလဲ၍ပြသော ဆရာဝန်သည်လည်း အာမခံစနစ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသူဖြစ်ရပါမည်။ GP ဆရာဝန်မှ လိုအပ်ပါက အထူးကုထံသို့ လူနာလွဲပေးရပါမည်။ အထူးကု မှလည်း လိုအပ်သော ကုသမှုပြီးစီးပါက လူနာအား GP ဆရာဝန်ထံသို့ ပြန်လည်လွှဲပေးရပါမည်။ အထူးကု မှနေ၍ လူနာကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခွင့် မရှိပါချေ။ သို့သော် အချို့သော အထူးကုများအား ချွင်းချက်အနေဖြင့် လူနာများအား တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခွင့် ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ OG များ၊ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်များ နှင့် မျက်စိရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်များဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုအထူးကုဆရာဝန်တို့နှင့် ပြသလိုပါက GP ဆရာဝန်များထံသွားစရာမလိုချေ။ တိုက်ရိုက်ပြသခွင့် ရှိသည်။
လူနာသည် ဆေးရုံ ဆေးခန်းကို သွားရောက်ပြသပါက အာမခံကဒ်ပြားကို အမြဲတမ်းယူဆောင်သွားရသည်။ ထိုကဒ်ပြားဖြင့် ကုသမှု ကုန်ကျစရိတ်မှန်သမျှကို မှတ်တမ်းတင်ထားရပါသည်။ အာမခံစနစ်ဖြင့် ဆေးကုသလိုပါက မိမိမှတ်ပုံတင်ထားရာ ဒေသရှိ အာမခံအဖွဲ့အစည်းမှ အသိအမှတ်ပြုသော ဆေးရုံဆေးခန်းတွင်သာ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ကုသမှုခံယူခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ရပါမည်။ သို့သော် သောက်ဆေးဝယ်လိုပါက ပြင်သစ်တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၀ယ်ခွင့် ရှိပါသည်။ အာမခံငွေကြေးပြန်လည်ပေးချေမှု (reimbursement) သည် အကြီးစားခွဲစိတ်မှုများ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ အသေးစားခွဲစိတ်မှုများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကလေးမွေးခြင်းအတွက် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ နှင့် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းတို့အတွက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း တို့အတွက် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ကျန်ရှိနေသေးသည့် ရာနှုန်းအနည်းငယ်သော ကုသမှုများအတွက် လူနာများမှ အလုံးစုံ ကုန်ကျခံရပါသည်။ ဆေးဝါးများအတွက် မူ အမျိုးအစားအပေါ်မူတည်ပြီး ၁၆ မှ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
တချို့သော ဝေဒနာသည်များအတွက် အာမခံစနစ်က ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ အရေးပေါ်လူနာများနှင့် ဆီးချို ကင်ဆာ အစရှိသည့် နာတာရှည်ဝေဒနာသည်များဖြစ်ကြပါသည်။ အဆိုပါလူနာများသည် ရေရှည်ကုသမှုခံယူရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဆေးရုံတွင် ရက် ၃၀ အထက်နေသည့်တိုင် အာမခံစနစ်က ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
ပြင်သစ်ပြည်တွင် Minimum revenue of introduction ဟုခေါ်သော ၀င်ငွေနည်းပါးသူများကို အာမခံကင်းလွတ်ခွင့် ပေးသည့် စနစ်တစ်ခုရှိပါသည်။ ထိုစနစ်တွင် အကျုံးဝင်စေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အချက် အများအပြားရှိသော်လည်း အဓိကအချက်မှာ တရားဝင်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော ၀င်ငွေပမာဏထက် လျော့နည်းသူဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံသားများအတွက် အာမခံကြေးကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားပြီး နေမကောင်းပါက ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ပံကြေးရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Complementary insurance ( ဖြည့်စွက်အာမခံစနစ်)
ပြင်သစ်ပြည်တွင် ကျန်းမာရေး စရိတ်စက တို့ကြီးမြင့်လာမှုကြောင့် အစိုးရသည် အာမခံထောက်ပံ့ပေးသော ပမာဏကို လျှော့ချဖို့ ကြိုးစားလာသည်။ ထို့ကြောင့် အချို့နိုင်ငံသားများသည် အစိုးရ၏ ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်အပြင် ဖြည့်စွက် အာမခံဟုခေါ်သော စနစ်တစ်ခုဖြင့်ပါ အာမခံထားလာကြသည်။ ၎င်းစနစ်သည် အစိုးရအာမခံစနစ်မှ မထောက်ပံ့ပေးသော ကုသမှုများကို ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားတို့သည် မိမိ၏ ၀င်ငွေ၊ ရောဂါရာဇ၀င်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတို့အပေါ်မူတည်ပြီး သင့်တော်ရာ package ကို ရွေးချယ်ခွင့် ရှိပါသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၈၀ နှစ် ရှိပါသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးစနစ်သည် ထိန်းသိမ်းခ ကြီးမားသော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေးစနစ်များထဲတွင် တစ်ခုအနေဖြင့် ပါဝင်ပါသည်။ လူနာများအတွက် ကော ဆရာဝန်များအတွက်ပါ ရွေးချယ်စရာ များပြားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
Labels: French, Health financing, Health insurance, Health system, Quality of care
ကျွန်တော်လည်း ကျန်းမာရေးအာမခံအကြောင်း (အထူးသဖြင့် အမေရိကား အာမခံပုံစံ) ကိုရေးနေတာနဲ့တော့ အချိန်ကိုက်ပဲဗျာ။ ကျေးဇူး။
ွှThank you all for these articles ကိုဇီဝက,ကိုလှမွန်။
France is what I am never interested in. But this article is interesting. thanks for that
Yeah, France is not interesting except Zidane but their health care system is one of the best.